कसरी अपनाउने स्वस्थ जीवनशैली ? अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण जानकारी, पढेपछि सेयर गर्नुहाेला - ज्ञानविज्ञान
स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको लागि टिप्स
१. स्वस्थ खाना खाने
जुन खानेकुरामा धेरै ट्रान्स फ्याट हुन्छ त्यसमा ती खानेकुरा हुन्छन् जस्तै बेक गरिएका, प|mाइ गरिएका खानेकुरा, प|mोजन पिज्जा र अन्य प्रशोधित खानेकुरा आदि ।
अस्वस्थ बानीहरुबाट बच्नुहोस्
धेरै छिटो तौल कम गर्ने आश्वासन
तपाईंको बानी नबदलीकन तपाईको तौल कम गराउने वाचा
धेरै पैसा खर्च गराउन भन्छन् भने
खान योग्य विकल्पलाई कम गर्छन् र तपाईंको सन्तुलित पोषणलाई बढाउँदैन भने
आँफैलाई सफा राख्न नभुल्नुहोस्
अन्य केही सल्लाहहरु
नियमित धेरै पानी पिउनुहोस् । वयष्क मानिसको लागि दैनिक ८ देखि १० गिलास पानी पिउन राम्रो हुन्छ ।
नियमित रुपले सँधै व्यायाम गर्नाले तपाईंको शरीर भित्रैबाट मजबुत हुनछ । यस बाहेक व्यायामले मुटुरोग मधुमेह र मोटोपना जस्ता समस्याको पनि रोकथाम गर्छ । तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्यले तपाईंको मानसिक विकासलाई पनि प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै नभुल्नुहोस् ।
सँधै सकरात्मका सोच राख्नुहोस् र सदैव खुसी कसरी हुने भनेर जानकारी लिनुहोस् । खुसी रहन चाहने मानिसले स्वास्थ्यसँग जोडिएका जानकारी लिने काम पनि गर्छन् त्यसैले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको लागि आफ्नो खुसीमा पनि ध्यान दिनुहोस् ।
कसैसँग कुराकानी गर्दा थोरै मुस्कुराउनुहोस् र हाँस्दा दिल खोलेर हाँस्ने कोसिस गर्नुहोस् । तपाईं धेरै राम्रो र स्वस्थ महसुस गर्नुहुनेछ ।
Don't Miss it दम्पतीले विशेष सर्तकता अपनाउनु पर्ने, गर्भको बच्चालाई कसरी स्वस्थ्य र आकर्षक बनाउने ?
Up Next रक्सी पिउँदै नपिउँने, पिएमा के गर्ने ? एक पल्ट पढ्नै पर्ने लेख
विशेष गरी दिनमा महिलाको आधाभन्दा बढी समय किचेनमै बित्ने गर्छ । खाना पकाउँदा साना साना कुराले पनि समस्या उत्पन्न गराउँछ…
मैदाको रोटी र पास्ताजस्ता खानेकुरामा पाइने ग्लुटेन -खानेकुरामा पाइने प्रोटिनको समूहले मानिसहरुमा मानसिक समस्या पनि निम्त्याउने पत्ता लागेको छ ।…